१ राजकुमारीको भित्रि ईच्छालाई प्रस्तुत गरिएको म्युजिक भिडियो ‘आउन माया’ ! (भिडियो सहित)
काठमाडौं – गायिका तथा सञ्चारकर्मी योजना पुरी र गायक बिरेन्द्र श्रेष्ठको स्वरमा ‘आउन माया’बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । अम्बिका गुरुङ्गको शब्द रहेको यस गीतमा दीपक शर्माको संगीत छ । एक राजकुमारीको भित्रि ईच्छालाई प्रस्तुत गरिएको गीतको भिडियोमा अभिनेता पुष्प खड्का र मोडल सृष्टि खड्कालाई फिचर्ड गरिएको छ । जहाँ सृष्टि राजकुमारीको भूमिकामा प्रस्तुत छिन् । भिडियोमा सृष्टिप्रति पुष्पको एकोहोरो प्रेम देखाईएको छ । भिडियोलाई सुरेन्द्र बसेलले कोरियोग्राफी तथा निशान कश्यपले निर्देशन गरेका हुन् । गीत अनुसार भिडियो आकर्षक बनेको छ । उद्धव दाहालले भिडियो खिचेको हुन् भने विकास दाहालले यसको सम्पादन गरेका हुन् । डिसि नेपाल ।
नेपाली सिने जगत यतिबेला हलमा राम्रो फिल्म पनि नचलेर हरेक साता निर्माताहरु टाँट पल्टिरहेको अवस्थामा छ । ठूला स्टारका फिल्मले सजिलै लगानी सुरक्षित हुने विश्वासमा महँगो पारिश्रमिक तिरेर लिइएका कलाकारहरुको फिल्म समेत चलेका छैनन् । चलेका स्टारहरु पनि कन्टेन्टभन्दा पनि पैसामुखी भइरहेका छन् । डिमाण्ड गरेजति पारिश्रमिक पाए भने सकभर उनीहरु फिल्म उम्काउन चाहँदैनन् । यसले नेपाली फिल्म र कलाकारप्रति दर्शकको विश्वास विस्तारै विस्तापित हुँदै गएको छ ।
अहिले एउटा फिल्म बनाउन चलेको कलाकार लिए पारिश्रमिकमा मात्रै ७० देखि ८० लाखसम्म छुट्याउन पर्ने अवस्था छ । चलचित्र हलसम्म पुग्दा करिब २ करोड वा सोभन्दा माथिको बजेट पुग्न जान्छ । २ करोडमा बनेको फिल्मले हलबाट करिब ९ करोडमाथि कमाउनु पर्ने देखिन्छ । तर हातको औंलामा गनिने केही सीमित चलेका स्टारमा पनि आफ्नै बलबुतोले दर्शकको खल्तीबाट ९ करोड झार्न सक्ने सामथ्र्य भने छैन ।
तर, निर्माताहरु उनीहरुमाथि नै आँखा चिम्लिएर लगानी गर्न तयार छन् । २० देखि ५० लाखसम्म पारिश्रमिक माग्ने कलाकारले आफ्नै पारिश्रमिक पनि उठाउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने खोज्न किन आवश्यक ठान्दैनन् निमार्ताहरु र सोकारहरु ? यस सिने जगतमा जस्तो सजिलो गरि नाम र दाम कमाउने क्षेत्र अरु छैन । यसकारण पनि चाँडो प्रतिफल खोज्ने लोभमा नेपाली फिल्ममा लगानी गर्न ओहिरिने नयाँ फिल्ममेकरको बढ्दो चाप छ ।
विदेशी फिल्मले नेपालमा आफ्नो बजार बलियो बनाउँदै लागेको छ । नेपाली फिल्मले भने घरेलु बजारमा नै आफूलाई प्रभावशाली देखाउन सकिरहेको अवस्था भने छैन । यसले नेपाली फिल्मको भविष्य भयाबह देखिन्छ । करीब २ वर्ष अगाडि अभिनेता अनमोल केसीले फिल्म ’कृ’ मा २२ लाख पारिश्रमिक लिएपछि सिनेवृतमा ठूलै तरंग ल्याएको थियो । किनकि, यसअघि कुनै अभिनेताले यो पारिश्रमिक हात पार्न सकेका थिएनन् । यसको केही महिनामा अभिनेता प्रदीप खड्काले पनि फिल्म ’लिलिबिली’ मा २२ लाख पारिश्रमिक बुझेको निकै चर्चा परिचर्चा समेत भयो । यसपछि यी दुई अभिनेतामा पारिश्रमिकको मामलामा को नम्बर वान ? भन्ने लडाइँ यतिबेला देखिएको छ ।
चलचित्र ’मंगलम’ बाट आम दर्शकमाझ परिचित एक अनुहार हो पुष्प खड्का । उनले मंगलम भन्दा अघि दर्पण छाँयामा काम गरेता पनि त्यसले उनलाई खासै दर्शक माझ चिनाएका भने थिएनन् । उनले पनि महँगो पारिश्रमिक बुझ्ने अभिनेताको सूचीमा आफूलाई इन्ट्री गराउने छनक देखाएका छन् । एक फिल्ममा ३० लाख पारिश्रमिक मागेको खबर अहिले चर्चामा छ । यो कुरा उनी आफैंले स्वीकार गरेको समेत बताइएको छ ।
दार्जि्लिङका एक निर्देशकले अफर गरेको फिल्ममा उनलाई आफ्नो भूमिका मनपरेको छ । उनी निर्माण टिमले ३० लाख दिए काम गर्न राजी छन् । निर्माताले भने केही घटाउन आग्रह गरिरहेका छन् । हाल कोहलपुरमा फिल्म ’मारुनी’ को छायांकनमा उनी व्यस्त छन् । यसरी सिने जगत राम्रो चलचित्रले भन्दा पनि महंगा कलाकार निकै तातिएको छ ।
बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीतिर आकर्षित हुने कलाकारको संख्या बढ्दो छ। बलिउडमा काम गर्ने चाहना भएका कलाकार नेपालमा पनि भिटिन्छन्। कति नेपाली कलाकारले बलिउडमा काम गर्ने चान्स पनि पाए। एक समय नेपाली अभिनेत्रीले बलिउडमा राज पनि गरेका थिए। कति त अहिले पनि बलिउडमा संघर्षरत नै छन्। त्यस्तै बलिउडमा काम गर्ने सपना बोकेकी मोडल हुन् सृष्टि खड्का। उनी बलिउडमा आफ्नो पहिचान बनाउने दौडमा छिन्। उनले हालै एक भारतीय म्यूजिक भिडियोमा अभिनय पनि गरेकी छिन्।
उनी अभिनित ‘कुच तो हे’बोलको गीतलाई गायिका ज्योतिका तन्गरी र एसर देसैले गाएका हुन्। गीतलाई बजारमा जी म्युजिक कम्पनिले ल्याएको हो। गीतमा अजय जैसवालको संगीत र राशी महेस्वरीको शब्द छ। स्वप्निल जैसवाल निर्देशित म्यूजिक भिडियोमा पवन गौतमको छायाँकन, कृष्ण रसलको कोरियोग्राफी छ। सृष्टिले नेपाली म्यूजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेकी छिन्।
हेरौ एक राजकुमारीको भित्रि ईच्छालाई प्रस्तुत गरिएको म्युजिक भिडियो ‘आउन माया’ !